ရှေ့ဆက်ခရီး အဝေးကြီး | PoemsCorner
ကျွန်တော်ချစ်မိတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ဒီဇင်ဘာ (မိုးထက်အောင်) ။ …. စိတ် …. ။ ( sharon ) Professional Authors
jokerhellen.kyuubi Jokg Joking Band !! Jue !! julydream june8 junemoe justin k nge lay K Thiha ကကြီး kajoeyoke kamyingkoung Kant Kaw Maung karyanlwin karyanlwin.lwin kathitni1980 kaung htet zan ကောင်းကင်ချို kaungkinsoe ကောင်းကင်တိမ် မောင်ပင်လယ် kaungmyat kaungmyatlin Kaungngelay kaungpyae kawaykaung kawlin kaythari ke8love keyo ကျောက်ခဲ ကောင်မလေး kgzote4 Khaing khaingnay khampay KHANT MIN NAY khant naung Khant Zaw Lu အလင်းစက် ( khantkyi maung ) khayset ခီဂျော် ခက်လွှာ Khin chaw su Khinchawsu Khine Wint Yee khinsanyee Khitthit ခွန်ကြယ်ဖြူ(ဆီဆိုင်) ၂ khonlynnhtoon2010 ခွန်ကြယ်ဖြူ khunsoening khwetaungkhwin Kian Weird Kimnu နေသာ Eiphyolay Kirsty Kitty Yang Kje Way ko little bird ko phyo Ko Thant koaung kobakhat kogyi ဟိန်း kohtike kokoaung687 kokotunt မာရာ (MIT) kolion komin.monywa kominsoe komyo love konge KoNyein kophyolay kopyae123 kothan Kothant kounghtut koye kozay Ku Kuu kyagee13 kyalsinnkha kyalsote kyaltaryarpoem kyansitthar101 kyaw htoo bala Kyaw Myo Htet Kyaw Nine ကေအက်စ်အို KYAWKYAW kyawkyaw KyawLay kyawnainglin174 kyawsanoo kyawtint စောတိမ်နွယ် ကြယ်ဝေး Kye Young kyisoetun kyitha Minn Thike Htun Lamin Moe လမင်းဇော် (လမင်းပိုင်) laminpaing လပန်းဧည့် ဇော်။ ( ကျွန်တော်တို့အိမ် ) Latkhana layeik လေရိုင်း laynhyotshin laypyay layykyoe layyue Lazy Poet leo 2013 let yar liannoိလူလေး(ကျွန်းလှ) ကြယ်လင်းခ lin လင်းအိုင် Lin Htun ငွေရောင်လင်းလက် Lin Tayer linhtike linko linlatarkar linlattkyawswer လင်းလင်း linn Linn Thet Tant linnmoekhin linnmyat linnsakhmu linthein Linux littlebird liyonardo lllxhumorousxlll loafer lollypopsaint londonsmoker115 lonely KzA lonelyevil longbreak Lonndie Lyric လွန်း [Loon] LoRdie Ndk love tree lovedevil29 LoVeisevil အိရွှေစင် lovergirlsoelay Lovesick lovevirous7 လူကြီး lu jann lu min Aung Luanyanaung lucifer luck and love lucobest lucy9834 Neou lungelaypar လူသစ် luthit.yuc လူလေး လူရေး Lwan Nay Lwan Nge Lay lwanhlainge lwannaythu လွမ်းပိုင်ရှင် lwantaycho lwin pyin hlaing nge lwin pyin hlaing nge lwint lwint ya aung lxxnwaxx liyonardo147 lynn htet Lynn Yan Kha lynnkhaing လင်းခက်ထွေး လင်း တန် ဆောင် m2t1sept magicdream87 ဆူး maharmyo mainkalay mainmwe မြတ်မင်းညို မယ်မနော mamyawin မာန်ခက်ဝင့် manawphyulay Mann Khat Wint မတ်ဧပရယ် marshall maung nge MAUNG.NPA ချစ်ဦးသစ် မောင်နေပြာ may May Kha မေညချမ်း လမင်းမေ MayBeTomorrow maychitkhin နှိုင်းခ maylaynge Maymyothant မိုးနတ်ကြယ်စင် maypyo maypyo.pyomay maypyo.yioe2012 maypyo.yioe31 maypyo22889 maythi MayThu mayviolet MC Tayzar Meaningless meec mEmO meso Mg kg lay မောင်ခိုင်မြတ်(ရေဦး) star -gazer Mg thaw tar mg wa lone mgchannaye mgflock သစ်ပင် mgnyein Mg Ywar မှော်အလင်း michaelှSky lion နွေဦးညီလတ် Mickey Zin Mike.aung Mikyae mimi မင်းကိုကို min myat အတွေး mineain မင်းထက်ညိမ်း minkoko110 မင်းလုလင် minminjipsy minmyat minmyat28 ညနေယံ Flora White မင်းနေဝေး မင်းနေမာန်ခ မင်းမာန် minpyaephyoe6991 minratha minratha minsatwai minthant minthiha မင်းသူစိုး မိငြိဏ်းခက် ကျိန်စာသင့် စာမျက်နှာများ Mis Fiancee miss thandar miss tower MJ mk mmman modernpoemlay moe မိုးဒေ၀ါ မိုးအိမ်လူ Moe Eain Mat moe htet moe ma ma မိုးညို Moe pyar မိုးပြာရင်ခွင် moe sat way Moe Thit မိုးသစ်လေပြည် moe zaw naing moe-z မိုးကြီး(လေကြီး) moehnaung24679 moehtetaung18 moekyal moekyawlzin MoeLone moemakhahlaing moemoe159 မိုးသည်း moenhyat မိုးစွန်ကြယ် မိုးဆောင်းနွေ Moesut Nay မိုးတိမ်ခ(လင်းယုန်) moetharphyu.khinekhine moethatnyge မိုးသစ်ညို မိုးသီး moez-loverpoem moezat moezat1988 မိုးဇက် moezat88 moezawwin mon Monk monkey123 မုတ်သုံ moonangelgrl Mooshi Morace Morning Star morrethant မုဆိုး mr.black သွေးနက် MR.FUCKER Mr.Jugger mr.key28393 Mr.lonely mrccool mulaynwe mupai mutecoffee မြကြိုးနွယ် မြလေးသျှင် Myat Noe myatmin19 myatminthu myatnoe mg myat thu myboy myintzaw MYM Myo Win Than Myohanhtet myohtet myolay myothaik maxkyaw myowinnthan MyoZin mysticalman07 mysticmistral Myth Cyra မြူခိုးရိပ် Myukhoo 99 မြူမင်းသွင် naing နိုင်ကြီး Nakhamurasan Nan WIn Hlaing nandahtoon.it nanpyisoke NARA SHIKAMARU Narcissist naridoon Narkhoyar nate thit nateainsoe နက္ခတ် nattamee naunglwinoo naungye နော်ဧရာဝတီ nawsis nay aye bay ရာဟု nay min kha နေနွေနိုင် nay-paing Nayihtet နေလင်းအောင် အမေ့သားနေလင်းဖြိုး naymawin nayminarkar nayminkha2 nayminnthway nayminthura နေမိုးလူ နေညို nays naywoonnini nazawadi neon nesein သဘာဝလူရိုင်း newun nga pall ngapyot Nge Nge Lay ngechitoo ငယ်လေး မျှော်တော်ယောင် ngweyonlay nhankaunglay nhmgmg niaallin Nickey nicmicsic nightbird niyezaw NMT no one no~no noe sat nay akn norman Nothing Special NothingOwner novemberhein novemberhtetmyat nUmAsIs Number1Princess နွေ Nwainyo Nway Lay Yuuu NwayLinSet nwayoonaing nwenyeinaye nyaalinkarr Nyakalay ညမိုး nyanlinhtet nyanlynnmin Nyar Lat Taw nyarnathit nyein.nwe nyeinmoelwin ညီညီ မောင်ရှက်ပြေး nyihtwe nyikhit လေပြေ nyinyiaung nyo Nyo Linn Thit nyo2 nyuntmgaye ချီရွန် ဥက္ကာကိုကို(သံတွဲ) ယဉ်မင်းသူ ONE THREE oneonetwo oo.CoBrA Breeze orchid ပဂျီငို paing painglay99 paingtha paingthu paingzinoo painmyo paisoethumg ပန်းခရေ palipalar paloattoat pannei pannkhar panyeik parmauck PaSouk PAUK SA ရာဇမာန် (၂၁ ရာစု ) paye phyo paysatthu Pe Lay' peaceboy မြတ်ပုလဲဖြူ pencil ပိုက်ကွန် Phoe Si phoenixlay ဖိုးစည် phone mann tha phonegyi phoophoo Phyo Lay နတ်ဆိုး phyokhant [tgo] phyomg phyowai phyowaitoe phyu hnin oo Phyu MinThike phyuphyu မြူနှင်းမှုန် phyusinlay pi pi phyo ပိုင်မင်းဆွေ pink pinkgirlrcw Pinosniper Po ပိုးဟပ်ဖြူ poefalan poem lover poem.poem28 poemchitthu ကဗျာသရဲ poems poemscorner poisonous_flower polaris pole Polyglot Pon yate ဖူးမေ pooqee postmodernpoemlay potterkhant ppaung pphyo Prince Bo princess Princess july prisonerof love progammer Ptin ပုထုဇ၁ု purple Purplelover puyeitlay ပွင့်လွှာ Pyar Ye ပြည့်ဖြိုး မောင်ပညာ R kar rabbit raindrops raingirl redoranda Reinminn Renaissance Hom ရက္ခိတဇာနည် သူနောင် Rickindo Ricky Brown ridd Ro rocker rolynn Romeo rommelmoh royalrosie စိုင်းအိုက်ပီး(ကျောက်မဲ) SaiLin3Eureka(ယူရေကာ) saint saithiha saiwaiyan sakura Salai Peter ဆား Sam ကြယ်လွဲမိုး မောင်နေပြာ san san Sapal Net SARKO SaTaN satanzone ၁ Saung Hinn Phyu saungpanpwint saw may sawkaythwe sawmyawadi စောနေသွေး ပျော်တော်ဆက် sayarchit.ple sayesettay saypainghtut saytan737 scarlet scorpion လူအစစ် ( Crityan ) Second Two secretmyholidays ဆည်းဆာ set shanpepote ရဲမက်တော် sharon myorr myor sherry Shilo shin thant phyo Shin Thant Phyu shine lat nwe oo shinelalin ရှာင်လောင်(S.A.i) နှင်းသဲဖြူ ရွှေနဒီ shwe sin ရွှေအိမ်စည် ShweChaw ShweKoNat shwelatepyar ရွှေမန်းသား ရွှေညီမလေး shweSoe Shwethamee shweyi shweyone si.thu6355 silent heart sillydemon Simon SimpleSimplest simplesmile sinpoems sinsin SisThi sitayenyein Sithu Yae Yint Htun sithuphyonaing Sky Lion sky smith Sleepy Luke slwal smartvirus34 smile စုနိုင် Snowflake snowpan snowy soe wunna ရွက်စိမ်း soehtetaung2010 soekothu soelay soemaungmaung1 soenay72 soe soethu ဝေဟင် soeyannaingooo မြေနံ့ စုန်းပြူး songmoezin sorceress sorrower.kl soundkawai star starlife starlight su Su Taryar Lwin ဒိမ်ဆန် suhnin sukkoth summer scent Summergreen sunflower ဆူးနစ်ရင် supanshin Surrender sweetz စစ်မုန်းပုန်ကန် tabound taetaehloatlayt taimhuai တိမ်တိုက် taker takotaw တဦးတည်းသော tapathe ဆိုးပေလေလွင့် tapotawe tartie.4star တာရာကိုကို taryarlinhtet tawtharlayyannaing19 Tay Zar taylay စက္ကူငှက် tayza TazarAung Teardrop TehhNoob terry သဒ thae ko thae thae thukhacho ThaeThaeLay thahanthit သလင်း သံယောဇဉ် ( ငါးသုံး) thandar thangyan thansin thantzin thanyawzin thanyawzinmin thar gyi thar khant Thar Nge tharmoe tharngae သားသား သက်ထားငြိမ် သက္ကရာဇ် သုတဖြူ thaw သော်လင်းသိုက် thawna thay thit su.mdy theant theena တစ်စုံတစ်၇ာ jo-z Thet Twe လုလင်ငယ်သွေး thetnge ဇော်ထိုက် thiha112 saithihatawe သီဟ (တီပီ) thinzar သီရိ သစ်ဆန်းခန့် thonnsitt Thorn Hnin Si Thorny Rose (ကာရံချို)သူ သုသျှင် thukher thukuma thulattyar(moeset) moonlay thureingzaw thutaw Thuya Ko Ko thuyaaung ကျော်ဖုန်း(ရန်ကုန်) Thuyeintun နွဲ့ဆိုး Tny Tide Tigress Tin Myo Naing tint maw kyi Titan TK T Toat Gyi tomatoinle triblenon ဗုဒ္ဓဟူး သွေး twinheart unlucky.1330 vampire တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း venus.lover venus18 veronnight viewviewlay Village Chat Kyi Village chat lay vinod violet venom violet-13 Violet.Violet တယော virtualheart vza အ၀ါ Wai Phyo Aung wai tun Wai Yan WaiGyi waihinn waihninkoko waiko ဝေလင်း waimhucho မိုးသောက် waiphyo waiphyomauk war10ck wathonemoe ဝေးငယ် werewolf weya whiskykoko အဖြူရောင် နာနတ်သီးလေး whiterose11 winkokonaing winkyawkyaw10 winnysea winthtet wintintaung wordsareflowingoutlikeendless writeforlife wxad X - ray xeroxone7 xinix911 frostyxcot yaephyar ရွှေကြယ်မိုး yaeyintkhine yamakasi Yaminn Aung yamone phoo Yan Thu yangoncupid Yangonese yankinviper နှိုင်းဆစ်ဟိန်း yannaing yanwayhin ဝေရီမူး ရာဖြိုး ရရစ်ဇူး ရဲထွေး(UCSM) yE THu ရဲဝင့်သူ ၇ဲကို ko ye yelaylover2010 yelinaung yeman92 YENKEE ဆည်းဆာ(ရဲသူ) yetwaynaung yichengyi yine ရင်ခတ်အလွမ်း ရင်ခတ်လူ (E.Y. U) yinnintalwan ရင်နင့်အောင် ရစ်လုံး Min Thant yonlay Yoon yoondimoon you youneaein yu pa yusan ယုသာ ပုံရိပ် yuyu ရွက်သစ် z34b19ry0 ဇ Za TaGwel ဇယျော်ဇယျ ZappyEuphoria Zar Zar zarniaung zarnimaung Zaw Pyae zaw zaw aung ဥတ္တရ zawlynnaung zawminhtike zawmyotun အရိပ် B.Aကိုကိုဇော် Zay Myint ဇေယျာဖြိုး zayar zayarmin Zayaw.za.ya virus zero Zero Boyz zerocore zerolay Zgyi zin thault zinminnaye zinmintun zinphyothulay ဇင်သူ(civil) zizilay88 zo rin zombie zuzu zy ဇော်ဖိုး ကဗျာချို ကိုကိုဖရီး ကိုကိုသုစံ ကိုသျှား ကိုပေါက် မန္တလေး ခင်းခင်း ခိုင်ဆွေဇင်သင်း ချမ်း ချမ်းငြိမ်း(ဗိုလ်ချိုမြေ) johnlin52(DSA) မိုးသူ(တောင်ကြီး) မင်းနိုင် ဇလပ်ဖြူ NYI MIN KHANT တာကော ထိရ ဒဏ်ရာ နတ် ရိုင်း နတ်သမီး မင်းခန့်သူ (ကျောက်ဆည်) မင်းဆက်ဟိန်း မိုးစက်သစ် မိုးတိမ်ကဗျာ မိုးသဲ မိုးကောင်းကင် မျိုးသူထက် ရင်ထဲကစန္ဒ္ဒာ ရှင်ထိပ်ထား လင်းဆက် လင်းလက်ဘုန်း လူမော်ငြိမ်း သားခေတ် အင်းဝသူလေး အမည်မဲ့ အမုန်းနတ်သားအပြန်စား အလင်းရောင် အသဲကွဲမိုး အိမ့်ဖုန်းပြည့် ကျော်ဖုန်း နေသွေး(မနောမြေ) မေခက်ဆူး မော်နီ ယောနသံ ရွှေငါး လေပြည်အေး အေးချမ်းဖြူ မြတ်ချစ် ကြက်ခြေခတ်X ကြယ်စင်အိပ်မက်သစ် ကြယ်စစ်သည် ကြယ်ရောင်ထင် ဖြိုးဖြိုး PoemsCorner ChoicesSelect IssueAll TimeVOL01 [APR 08]VOL02 [SEP 08]VOL03 [FEB 09]VOL04 [JUN 09]VOL05 [MAY 09]VOL06 [JULY 09]VOL07 [AUG 09]VOL08 [SEP 09]VOL09 [OCT 09]VOL10 [APR 10]VOL11 [MAY 10]	ရှေ့ဆက်ခရီး အဝေးကြီး	Tweet	နှုတ်ဆိတ်ဆိတ် တိုးတိတ်တိတ်ပဲခပ်တုံးတုံး ငနဲတစ်ကောင် ကြေကွဲခဲ့တယ်ဖွင့်ပြောခွင့်မရ ခပ်ရိုင်းရိုင်း လှည့်ထွက်ခွင့်မရတော့လည်းခေါင်းငုံ့မြိုသိပ် ဟန်လုပ်ရယ်မောရင်းတအားကုန်းရှိုက်ဖွာလိုက်တာက အဆိပ်သင့်လေထုကြီးလိပ်ပြာမလုံတဲ့ ယုံကြည်ချက်တစ်ခုသိပ်ရှင်းစရာမလိုတဲ့ နားလည်မှုတွေအထပ်ထပ်ဆေးကြောလိုက်ပြီ ငါ့တလွဲအတွေးတွေခပ်ပါးပါး ပေကျံနေသေးတာက ငါကိုယ်တိုင် ။ပြင်မောင်းလုပ်နေကျ ငါ့အနာဂတ်ယာဉ်တက်မောင်းဖို့ဖွတ်ချက်..ဖွတ်ချက်ဆိုတာလဲ နားဝင်ပီယံတစ်ခုခုတော့.. ငါကိုယ်တိုင်သုတ်သင်လိုက်ပြီ အရှုံးတွေဆက်ခရီးနှင်ဖို့ တော့ ဘ၀အာမခံမလိုခဲ့ဘူးဆက်သွားရမှာကတော့ ငါ့ဘာသာပါ ….. ။ ။
You may also like to read ယုံကြည်ချက်ပါ….အောက်ခြေလွတ်တာနဲ့အဝေးကြီး
ခပ်ပါးပါးလေးပါဘဲ .. ဒါပေမယ့် ..
★•.☆ အိပ်မက်ရှည် ☆•.★
& 104 views	Comment #1 ခေါင်းငုံ့မြိုသိပ် ဟန်လုပ်ရယ်မောရင်း
ခပ်ပါးပါး ပေကျံနေသေးတာက ငါကိုယ်တိုင် ။
By: May Kha at Oct 5, 2011